XAAF oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Kheyre inay burburinayaan Maamulkiisa | Newsomali
XAAF oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Kheyre inay burburinayaan Maamulkiisa
Qoraal uu soo saaray ayuu uga digay faragelin maamulkiisa uga timid dowladda dhexe, iagoo soo qaatay qodob ka mida Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya oo dowladda Federaalka ku waajibinaya inay la tashato maamullada dalka.
Arrintan ayaa soo baxday kadib markii ay maanta magaalada Cadaado qoraal kasoo saareen madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulkaasi oo ka hor yimid, kuna gacan seyray go’aankii xalay kasoo baxay xafiiska madaxweyne Xaaf ee uu ku taageeray Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka.
HOOS KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEEDKA CUSUB EE XAAF
Waxaan uga digaynaa Dawlada Federaalka faragelinta qaawan ee ay ku hayaan maamulka Galmudug. Waxaa wax laga xumaada ah in ay Galmudugu la soo dhexgalaan kala qoqobid iyo caadifad qabiil. Galmudug uma dulqaadan doonto faragelinta iyo dhiilada qabiil ee ay Madaxweynaha iyo Raysal wasaaruhu horay ugula kaceen Hirshabelle.
Waxaan ugu baaqaynaa Siyaasiyiinta, Odyaasha, Waxgaradka, Aqoonyahanka, Ganacsatada, iyo Culimada kasoo jeeda Galmudug in ay meel uga soo wada jeestaan si wadajir ahna uga hortagaan daandaansiga iyo dhiilada lagu hayo Shacabka Iyo Dawlad Goboleedka Galmudug.